Infegy Atlas: Jawaabaha Sirdoonka ee Baraha Bulshada | Martech Zone
Infegy Atlas: Jawaabaha Sirdoonka ee Warbaahinta Bulshada
Jimco, Janaayo 30, 2015 Arbacada, February 4, 2015 Douglas Karr
Waxaa ka maqnaa inta badan cilmi baarista aan ku arko internetka waa macnaha guud ee tirakoobka la bixiyay. Waxaan ogaaday inay tirakoobyadu marin habaabinayaan (badiyaa ujeeddo laga leeyahay) oo lagu saleeyay daaqadaha duruufaha habboon ama dhacdooyinka aan caadiga ahayn. Si kastaba ha noqotee, way wadaagaan si kasta. Xaaladda marka la eego, aad ayaan ugu kalsoonahay in shixnad kasta oo dhexdhexaad ahi kuu sheegi doonto inay leeyihiin soo celinta ugu wanaagsan ee maalgashiga.
Suuragal ma ahan in qof walba uu noqdo kan ugu fiican… iyo ka sii muhimsan, kan ugu fiican waa mid shaqsiyeed. Macnaha guud ee ku xeeran waxaa ka mid noqon kara baaxadda shirkadaha, qiimaha shatiga, sifooyinka macmiilka u kaxeynaya xagga sare ugu fiican. Dhawaanahan, waxaan arkay isbarbardhiga nidaamyada CMS ee lagu calaamadeeyay kuwa ugu caansan - laakiin waxaa ka maqnaa macno kasta oo ku saabsan cabirka iyo ujeeddada nuxurka la daabacayay, kheyraadka gudaha ee lagu horumarinayo CMS, iyo dabacsanaanta CMS ee ku baahsan dhexdhexaadiyeyaasha. Waxa ugu fiican hal shirkad ma ahan tan ugu fiican tan kale - waa sababta DK New Media wuxuu noqday iibiye kalluun soo saara sannadihii la soo dhaafay. Ka faa'iideysiga macnaha guud, waxaan u dhigmeynaa shirkadda xalka ku habboon.
Waa kan fiidiyow aad u wanaagsan oo la hadlaya Caabuqa Atlas, oo ah barxad kormeer bulsheed oo loo adeegsado inay ka caawiso sumadaha inay go'aano fiican gaaraan kuna saleysan wadahadalka waqtiga-dhabta ah ee warbaahinta bulshada. Tusaalaheena kor ku xusan, sirdoonka bulshadu wuxuu keeni karaa burburka shirkad shirkadeed oo la jaan qaada xalka ay tahay inay ka fogaadaan ama ay xiiseeyaan.
Infegy Atlas waa barxad sirdoon bulsheed loo sameeyay si looga jawaabo su'aalaha iyada oo loo marayo afar meelood oo muhiim ah oo diiradda la saarayo:
Discovery - Infegy Atlas waxay si toos ah u soo saartaa sheekooyin si ay kuugu sheegto waxa ka dhacaya mawduucaaga, waxay soo bandhigeysaa dhacdooyinka muhiimka ah waqti ka dib, waxayna sharraxeysaa xogta, adiga oo kaa qaadeysa jadwalka isla markaana toos ugu jawaabaya.
Isbarbar - Ku orod illaa lix maaddo oo u gaar ah hal mar, iyo Infegy Atlas ayaa ku siin doonta aragti ballaadhan oo ku saabsan sida ay isu barbar dhigaan, waxa ay kaga duwan yihiin, iyo waxa ay wadaagaan. Datasets-ka ayaa si wadajir ah loo falanqeynayaa, oo ku siinaya macluumaad cusub oo aan macquul ahayn in lagu helo hal maaddo oo keliya.
Luuqadda - Infegy Atlas waxaa ku shaqeeya Luqadda Infegy, awood u leh akhrinta iyo tarjumaadda qoraalka sida aadanaha oo kale marka loo eego softiweerka. Tiknoolajiyaddan, oo lagu soo saaray Infegy in ka badan toddobo sano, waxay awood u leedahay falanqaynta luuqadda ee cajiibka ah, waxay ku siinaysaa gorfeyn lagu kalsoonaan karo oo hodan ku ah faallooyinka bulshada.
Data - Xog uruurinta ugu dheer ee bulshada ee ganacsiga, oo si guud looga soo qaatay kanaallo badan, oo caadi looga dhigay ka tarjumida guud ee dadweynaha, iyo si adag oo wasakhda loo sifeeyey si loo hubiyo natiijooyin sax ah
Halkan waxaa ah 10 dariiqo oo macluumaadkan looga faa'iideysan karo hay'ad ahaan:
Tags: atlas infegyLuqadda Infegydaahfurka bulshadasirdoonka bulshadaisbarbardhigga warbaahinta bulshadasirdoonka warbaahinta bulshadabarashada cilmiga bulshada
7 Xeelado Lagu Kordhiyo Abuurista Mawduucaaga
Kormeerka Sumcadda Sare ee Suuqgeeyayaasha Emailka